Mutlaq Al-Qaxtani:- Muxuu Ergeygan Qatar u soo dirtay Soomaliya ku noqday dhexdhexaadiyaha ugu wanaagsan caalamka ? | Gaaroodi News
Mutlaq Al-Qaxtani:- Muxuu Ergeygan Qatar u soo dirtay Soomaliya ku noqday dhexdhexaadiyaha ugu wanaagsan caalamka ?
Ka dib kulamo is xigxigay, Maraykanka iyo Taliban ayaa dabayaaqadii February 2020, kala saxiixday heshiis ku aaddan nabadeynta Afghanistan. Mutlaq Al-Qaxtani iyo Ra’iisul Wasaare Rooble oo ku kulmay Muqdisho
Balse, xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa degtay ka dib markii uu golaha shacabka ka noqday xeerkii muddo kordhinta, kaas oo dhaliyay khilaaf xooggan. Dr Mutlaq oo kulan la qaadanaya qaar kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee Soomaaliya.
Ra’iisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo lagu wareejiyay hannaanka doorashada ayaa ku baaqay shir ay madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada isugu imaanayaan 20-ka May magaalada Muqdisho